कुकुर प्रेमी सलमान खानसँग संसारको सबैभन्दा महंगो कुकुर भएको खुलासा ! • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
काठमाडौ । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ बलिउडमा सबैभन्दा बढि पारिश्रमिक लिने नायक हुन् सलमान खान कुकुर प्रेमी हुन् । उनमा कुकुर मोह ज्यादै रहेको छ । फिल्म र आफ्नो कम्पनी बिंग ह्युमनबाट करोडौँ रुपैँया कमाउने उनी कुकुरका शौखिन छन् । उनको अचम्मको सौख भनेकै कुकुर पाल्नु हो ।
सलमानसँग ‘माइसन’ र ‘माइजान’ नामको दुई कुकुरहरु छन् । जसको २०१६ मा मृत्यु भएको थियो । सलमान ती कुकुरहरु मरेपछि निकै दुखि भएका थिए । मिडिया रिपोर्टका अुनसार सलमान ती कुकुरहरुलाई एकदमै धेरै माया गर्थे । कयौ पटक सलमानले ‘माइसन’ र ‘माइजान’ लाई बिगबोसको सेटमा पनि लिएर गएका थिए । सलमानले कुकुरसँग संयम र धैर्यता सिकेको उनको भनाई छ । कुकुरले मलाई अनकंडिसनल माया गर्न सिकाएको छ ।
यि दुईपछि अब सलमानको साथमा ल्याब्राडोर, सेंट बर्नार्ड र नेपोलिटन मस्तिफ ब्रीडका कुकुरहरु छन् । यीनीहरुको नाम मोगली, सेंट र माई लभ हो । सलमानको एउटा कुकुर करिब २ लाख रुपैँयाको हो । जसकोलागि प्रत्येक महिना ५० हजार रुपैँया खर्च हुने गर्छ । सलमानले आफुनो कुकुरलाई यति धेरै माया गर्छन् कि, एकपटक बजरंगी भाईजान फिल्मको सुटिङ भईरहेको थियो । कुकुर बिरामी भएको खबर सुन्नेबित्तिकै सुटिङ रोकेर नै उनी घर आएका थिए ।